"Lionel Messi Waa Af-Xaaraami Iska Dhiga Qof Fiican Oo Degan" - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha“Lionel Messi Waa Af-Xaaraami Iska Dhiga Qof Fiican Oo Degan”
“Lionel Messi Waa Af-Xaaraami Iska Dhiga Qof Fiican Oo Degan”
January 12, 2022 Saed Mohamed
Goolhayihii hore Jerzy Dudek ayaa sheegay in Lionel Messi uu ku yahay garoonka dhexdiisa af-xaaraami aflagaado badan isagoo isku dayi jiray inuu ka careysiiyo daafacyada Real Madrid kulamada El Clasico.
Goolhayihii hore ee Liverpool oo 48 sanno jir ah ayaa u soo ciyaaray Real Madrid intii u dhaxeysay 2007 ilaa 2011, wuxuuna sheegay in mudadii uu Los Blancos joogay inuu maqlay Messi oo si xun u aflagaadeynaya Sergio Ramos iyo Pepe.
Dudek ayaa buug uu qoray ku yiri: “Wuxuu ahaa mid daandaansi badan, sida ay Barcelona iyo tababarahooda Pep Guardiola ay ahaayeenba. Waxay mar walba diyaar u ahaayeen inay ka careysiiyaan, inta badan waa ay ku guuleysan jireen.
“Waxaan arkay oon maqlay Messi oo si xun u aflagaadeynaya Pepe iyo Ramos, wuxuu ku hadlayay ma ahan wax laga filan karo inay ka soo baxaan afka qof u muuqdo mid degan oo lagu tilmaamo inuu yahay nin fiican.”
Dudek ayaa ku biiray Real Madrid isagoo 34 sanno jir ah laakiin waa uu awoodi waayay inuu fursad ka helo kooxda madaama Iker Casillas uu heystay booska koowaad ee goolka.
Goolhayihii hore ee Poland ayaa kaliya 12 kulan u saftay Los Blancos afar xilli ciyaareed uu joogay.
Si kastaba, Messi ayaa Real Madrid ka dhaliyay 26 gool taasoo ka dhigeysa gooldhaliyaha ugu sareeya ee taariikhda El Clasico.
Xagaagii wuxuu si xor ah ugu biiray Paris Saint-Germain iyadoo ay haatan iska garab ciyaaraan Sergio Ramos oo mar ay cadow ahaayeen.